တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျောခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ တရုတျနိုငျငံ ကွညျးတပျအထူးစဈဆငျရေးသငျတနျးကြောငျးသို့ သှားရောကျကွညျ့ရှုလလေ့ာ၊ တောငျပိုငျးစဈနယျဝနျးဌာနခြုပျ၊ ဌာနခြုပျမှူးနှငျ့တှဆေုံ့ဆှေးနှေး » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ – ၂၅
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွမ်ကျိုးမြို့တွင် ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးသစ်လင်းအုန်း၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ်တင့်ဆန်းတို့လိုက်ပါပြီး ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ကြည်းတပ်အထူးစစ်ဆင်ရေးသင်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်လေ့လာကြသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား ကြည်းတပ်အထူးစစ်ဆင်ရေးသင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး Brig. Gen. Xiao Qin Liang နှင့်တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမှသင်တန်းသားများ သင်တန်းတက်ရောက်နေမှုအခြေအနေများနှင့် သင်တန်းပို့ချပေးနေမှုအခြေအနေများအား Powerpoint ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သိရှိလိုသည်များအား မေးမြန်းဆွေးနွေးသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ သင်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများသည် သင်တန်းကျောင်းအဆောက်အဦရှေ့တွင် အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် သင်တန်းသားများအား သင်တန်းနည်းပြများမှ လေ့ကျင့်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ အဝေးထိန်းမိုင်းရှင်းယာဉ် လေ့ကျင့်မောင်းနှင်မှု၊ သင်တန်းသားအိပ်ဆောင်နှင့်စားရိပ်သာအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာကြရာ ကျောင်းအုပ်ကြီးက လိုက်လံရှင်းလင်းပြသသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံမှသင်တန်းတက်ရောက်လျက်ရှိသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်များအား ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ၍ သင်တန်းတက်ရောက်နေမှု အခြေအနေများအား မေးမြန်းအားပေးစကားပြောကြားပြီး ချီးမြှင့်ငွေများပေးအပ်သည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် တောင်ပိုင်းစစ်နယ်ဝန်းဌာနချုပ်သို့ရောက်ရှိကြရာ ဌာနချုပ်မှူး Vice Admiral Yuan Yubai နှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပြီး အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက် ကြသည်။
၎င်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား တောင်ပိုင်း စစ်နယ်ဝန်းကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှ Sr. Col. Lei Neng က တောင်ပိုင်းစစ်နယ်ဝန်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံမှုအခြေအနေများ၊ တောင်ပိုင်းစစ်နယ်ဝန်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ တပ်ဖြန့်ခွဲထားရှိမှုနှင့် ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းထားရှိမှု အခြေအနေများအား Powerpoint ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တောင်ပိုင်းစစ်နယ်ဝန်းကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်၊ ဌာနချုပ်မှူးတို့သည် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက် ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမို မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ချစ်ကြည်ရေးအားကစားအဖွဲ့များနှင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များအပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား တောင်ပိုင်းစစ်နယ်ဝန်းကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်၊ ဌာနချုပ်မှူးက ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။ နေ့လယ်စာသုံးဆောင်အပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တောင်ပိုင်းစစ်နယ်ဝန်းကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်၊ ဌာနချုပ်မှူးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ နိုဝငျဘာ – ၂၅
တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ကှမျကြိုးမွို့တှငျ ခဈြကွညျရေးခရီးရောကျရှိနသေညျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ တရုတျနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးသဈလငျးအုနျး၊ မွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျတငျ့ဆနျးတို့လိုကျပါပွီး ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ ကွညျးတပျအထူးစဈဆငျရေးသငျတနျးကြောငျးသို့ သှားရောကျလလေ့ာကွသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားအား ကွညျးတပျအထူးစဈဆငျရေးသငျတနျးကြောငျး ကြောငျးအုပျကွီး Brig. Gen. Xiao Qin Liang နှငျ့တာဝနျရှိသူမြားက ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံအပါအဝငျ နိုငျငံတကာမှသငျတနျးသားမြား သငျတနျးတကျရောကျနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ သငျတနျးပို့ခပြေးနမှေုအခွအေနမြေားအား Powerpoint ဖွငျ့ ရှငျးလငျးတငျပွရာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက သိရှိလိုသညျမြားအား မေးမွနျးဆှေးနှေးသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြား၊ သငျတနျးကြောငျး ကြောငျးအုပျကွီးနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့လှတျမွောကျရေးတပျမတျောမှ အရာရှိကွီးမြားသညျ သငျတနျးကြောငျးအဆောကျအဦရှတှေ့ငျ အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ သငျတနျးသားမြားအား သငျတနျးနညျးပွမြားမှ လကေ့ငျြ့ပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ အဝေးထိနျးမိုငျးရှငျးယာဉျ လကေ့ငျြ့မောငျးနှငျမှု၊ သငျတနျးသားအိပျဆောငျနှငျ့စားရိပျသာအတှငျး လှညျ့လညျကွညျ့ရှုလလေ့ာကွရာ ကြောငျးအုပျကွီးက လိုကျလံရှငျးလငျးပွသသညျ။ ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာနိုငျငံမှသငျတနျးတကျရောကျလကျြရှိသညျ့ အရာရှိ၊ စဈသညျမြားအား ရငျးရငျးနှီးနှီးတှဆေုံ့၍ သငျတနျးတကျရောကျနမှေု အခွအေနမြေားအား မေးမွနျးအားပေးစကားပွောကွားပွီး ခြီးမွှငျ့ငှမြေားပေးအပျသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ တောငျပိုငျးစဈနယျဝနျးဌာနခြုပျသို့ရောကျရှိကွရာ ဌာနခြုပျမှူး Vice Admiral Yuan Yubai နှငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားက ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွပွီး အမှတျတရစုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျ ကွသညျ။
၎င်းငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားအား တောငျပိုငျး စဈနယျဝနျးကှပျကဲမှုဌာနခြုပျမှ Sr. Col. Lei Neng က တောငျပိုငျးစဈနယျဝနျးနှငျ့ဆကျစပျလကျြရှိသညျ့အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြားနှငျ့ဆကျဆံမှုအခွအေနမြေား၊ တောငျပိုငျးစဈနယျဝနျး၏ လုပျငနျးတာဝနျမြား၊ တပျဖွနျ့ခှဲထားရှိမှုနှငျ့ ပွညျသူ့စဈတပျဖှဲ့မြားဖှဲ့စညျးထားရှိမှု အခွအေနမြေားအား Powerpoint ဖွငျ့ ရှငျးလငျးတငျပွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တောငျပိုငျးစဈနယျဝနျးကှပျကဲမှုဌာနခြုပျ၊ ဌာနခြုပျမှူးတို့သညျ နှဈနိုငျငံနယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျ တပျမတျောနှဈရပျအကွား တှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုမြား၊ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားတိုးမွှငျ့ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ နယျစပျဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ နယျစပျဒသေတဈလြှောကျ ပူးတှဲဆောငျရှကျရေးကိစ်စရပျမြား၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွားခဈြကွညျရငျးနှီးမှု ပိုမို မွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ ခဈြကွညျရေးအားကစားအဖှဲ့မြားနှငျ့ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြားအပွနျအလှနျလညျပတျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားကို ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားအား တောငျပိုငျးစဈနယျဝနျးကှပျကဲမှုဌာနခြုပျ၊ ဌာနခြုပျမှူးက ဂုဏျပွုနလေ့ယျစာဖွငျ့ တညျခငျးဧညျ့ခံသညျ။ နလေ့ယျစာသုံးဆောငျအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ တောငျပိုငျးစဈနယျဝနျးကှပျကဲမှုဌာနခြုပျ၊ ဌာနခြုပျမှူးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျခဲ့ကွသညျ။